माओवाद र एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद विसर्जनको कुण्ठा, ईश्वरमाथि डण्डा ? - Dainik Nepal
माओवाद र एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद विसर्जनको कुण्ठा, ईश्वरमाथि डण्डा ?
दैनिक नेपाल २०७६ साउन ६ गते १०:३६
काठमाडौं, ६ साउन । नेकपा सांगठानिक एकता एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सचिवालयको बैठकले ७७ जिल्ला र ६ वटा महानगरपालिकाको ईन्चार्ज र सह–ईन्चार्जको टुंगो लगाई सकेको नेकपाले अब विभागीय जिम्मेवारी तय गर्न बाँकी छ ।
अरु विभागको नेतृत्वमा सहमति भईसकेको बताई पनि तत्कालीन एमालेको भागमा परेको पार्टी स्कुल विभाग नेता ईश्वर पोखरेललाई दिन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भएपछि एकाएक तत्कालीन माओवादी पक्षबाट बखेडा झिकिएका खबरहरू बाहिरिएका छन् ।
आ–आफ्नो भागमा परेका विभाग र जिल्लाको नेतृत्व तोक्न तत्कालीन पार्टीहरूको छुट्टै अनौपचारिक वैठक बस्नु अन्यथा नमानिए पनि एक नेताले पाउन लागेको जिम्मेवारीको विपक्षमा हात धोएर लाग्नुको के अर्थ ?
प्रष्ट छ– चाहे रुप पक्ष भनियोस् वा सार पक्ष अबको नेकपाको विचार जनताको बहुदलीय जनवादकै वरिपरि छ । ओलीले भनेको त्यही हो, ईश्वर पोखरेलले भनेको त्यही हो ।
अहिले जतिसुकै शब्दमा खेल्न खोजिए पनि माओवाद र एक्काईसौं शताब्दीको जनवादको औपचारिक विसर्जन भईसकेको छ । त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त भईसकेको छ ।
स्कुल विभाग पार्टीका आधिकारिक विचारको सुत्रीकरण र पार्टीव्यापी प्रवाहको काम गर्ने विभाग हो । मदन भण्डारीसगै जनताको बहुदलीय जनवादको निर्माण र विकास गर्ने केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल वा ईश्वर पोखरेलले मात्र यो काम सबभन्दा प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन् । उनीहरूले मात्र सुसंगत तरिकाले विचारलाई एकताको महाधिवेशनसम्म डोहोर्याउन सक्छन् ।
माओवाद वा माओ विचारधारा वा एक्काईसौं शताब्दीको जनवादको ह्याङ्ओभर हटिनसकेका नेताहरूबाट यो काम या त हुन सक्दैन, या त भडकाव तिर लैजाने खतरा हुन्छ ।
नेकपा एकता बराबरी शक्तिको एकता होइन । यो एकता बहुमत र अल्पमतको एकता हो । यहाँ दुबै तर्फका संवेदनसीलतालाई सोही बमोजिम सम्बोधन गर्नैपर्छ । बहुमतले तय गर्न चाहेको कुनै नेताको जिम्मेवारी स्वीकार्न ईन्कार गर्नु वा त्यसविरुद्ध संगठित धावा बोल्नु केवल कुण्ठाग्रस्त प्रयासमात्र हुने स्वभाविक देखिएको छ ।